Magacyada hordhaca ah oo golaha wasiirada xukuumada Cabdiwali Sheekh oo la helay – idalenews.com
Magacyada hordhaca ah oo golaha wasiirada xukuumada Cabdiwali Sheekh oo la helay
Iyadoo buuq uu hareeray xulista xubnaha ka mid noqonaaya golaha wasiirada cusub, ayaa hadda waxaa si guud la isula gartay tirada golaha iyo qaar ku mid ah xubnaha la isla ogolaadey. Tirada golaha wasiirada ayaa noqonaysa 25 wasiir, waxaan ka mid noqon doona 3 ra’iisul wasaare ku xigeen.
Shaxda Beelaha 5ta ah iyo sida ay u kala helayaan xubnaha golaha wasiirada ayaa ah:
1. Beelaha Awdigil ayaa la sheegay in loo qoondeeyey 2 wasiir oo mid ka mid ah uu yahay Ra’iisul Wasaare ku xigeen, halka Beelaha Mirifle iyagu helay 3 wasiir. Dr. Cali Saciid Fiqi (Digil/Tuni) iyo Wasiirkii hore ee Gaashaandhiga Abuukar Mardaadi (Beesha Digil/Gare) ayaa labadoodu beelahoodu isku haystaan xilka R/wasaare ku xigeenka ahna wasiir buuxa, waxaana loo badinayaa in Abuukar Mardaadi loo magacaabo xilkaasi, maadaama Dr. Fiqi la sheegaayo inuu shaqsiyan xilka safiirnimo ee Belgium, isla markaasna xiiso u aheyn xilka wasaarada Gaashaandhiga.
Wasiirka Xanaanada Xoolaha ayaa waxaa aad ugu ololeynaaya Engineer Saalax Sheikh Cismaan(Digil/Geledi) oo ka mid ah aqoonyahanada ku dhaqan dalka dalka Ingiriiska waxaase weli faraqa haysta xildhibaan ay isku beel yihiin oo lagu magacaabo xildhibaan Xuseeneey oo isaguna doonaayo in xilka kale ee beeshiisu hesho ku darsado.
Beelaha Mirifle (sagaal) waxaa labadooda xubnood la siiyey Beesha Hadama iyo Geelidle. waxaana labada qofood ee beesha Hadame ku dagaalameysa xilkaas ay kala yihiin xildhibaan Saransoor iyo wasiirkii hore ee ganacsiga iyo warshadaha Max’uud Dalab. Dhinaca Beesha Geelidle ayaa iyadu soo magacowdey gabar xildhibaanad ah oo lagu magacaabo Luul oo uu qabo Ganacsade Cali Marguus.
Beesha Mirifle (Sideed) ayaan iyadu murun ka taagneyn cid la gudbiyey waxaana la sheegayaa in loo wado in Yuusuf Macalin Amiin Baadiyoow ahna shaqsi ay aad isugu dhow yihiin xildhibaan Shariif Xasan Sheekh Aadan loo wado inuu noqdo wasiirka Beeraha
Wasiirka Beeraha Yuusuf Macalin Amiin Baadiyoow (Mirifle/Sideed/Leysaan) waxaana ay ilmo habreed yihiin Shariif Xasan Sheekh Aadan.
2. Beelaha Hawiye: Beesha Habar gidir ayaa loo qoondeeyey labo wasiir oo beelaha Saleebaan iyo Sacad la siiyey, kuwaasoo kala ah wasiirka amniga qaranka C/kariim Xuseen Guuleed, iyo Kamaal Guutaale agaasimihii madaxtooyada oo isna la sheegay inuu helaayo wasiir buuxa
Beesha Xawaadle ayaa la sheegayaa in wasaarad muhiim ah loo qoondeeyey, C/laahi Goodax Bare ayaana la sheegayaa in loo wado inuu loo magacaabo xilkaas.
Beesha Murursade: Wasiir dowlihii arrimaha dibada Maxamed Nuur Gacal ayaa loo wadaa inuu noqdo wasiir buuxa, welina waxaa jira shaqsiyaad beesha ka tirsan oo weli faraqa haysta Gacal inuu soo noqdo.
Beesha Gugundhabe gaar ahaan Gaaljecel ayaa loo wadaa inuu noqdo wasiir ka tirsan golaha cusub ee xukuumada C/wali
3. Beelaha Direed oo buuqa ugu badan uu ka taagan yahay, ayaa waxaa xilkeeda la rumeysan yahay in ay waydo Fowsiyo Xaaji Aadan, waxaana bedelkeeda la sheegaayaa in wasaarada arrimaha dibada ahna Ra’isulwasare ku xigeen loo magacaabo Yusuf Ibrahim Kaahin [Yusuf Dheeg], kaasoo shaley dalka dib ugu soo noqday isagoo uu wehliyo Jaamac Max’ed Qaalib.
4. Beelaha Daarood: ku simaha wasiirka Maaliyada Maxamuud Xasan Suleymaan oo iyagu la saadaalinayaa inuu dib u soo laaban doono, halka Xuseen Cabdi Xalane loo wado inuu noqdo R/wasaare ku xigeen ahna wasiirka Lacagta iyo Deeqaha Caalamiga.
5 Beesha 5aad: Faarax C/qaadir oo ahaa Wasiiru dowlihii Madaxtooyada ayaa isna liiska ku jira oo wixiisa ay cad yihiin, gaar ahaan Wasiirka Dastuurka, Cadaalada iyo Dib u Heshiisiinta. Marwo, Maryan Qaasim ayaa la sheegayaa in loo wado mid ka mid ah wasaaradaha Caafimaadka ama wasiirka arrimaha horumarinta qoysta. iyo kuwa kale.
Isku soo wada duuboo, dowlada cusub ee Ra’iisul wasaare C/wali Sheekh Axmed ayaan haba yaraatee uusan ra’iisul wasaaruhu u lahayn aqoon, waxaana ay ra’iisul wasaaruhu ku soo gaareen qaab beeleed iyo ishaysi beelaha dhexdooda ah, mana la garan garo sida ay u wada shaqeyn karaan xukuumad aan tayo, karti iyo aqoon u laheyn howlaha faraha badan ee xukuumada looga fadhiyo.
Sabtidii shalay ayaa loo balansanaa in lagu dhawaaqo Golaha Wasiirada, maadaama ay gabo gabo dhow ku dhow dahay waqtigii la filayay in lagu soo magacaabo Wasiirada iyo mudadii uu u qabtay Baarlamaanka oo aheyd ka hor 10 Janaayo, hase ahaatee waxaa uu qorshuhu yahay in 24-ka saac lagu dhawaaqo
Bam lagu tuuray xaafada Hanti-wadaag ee Degmada Jowhar oo khasaare dhaliyay.
Xaflad weyn oo la filaayo maanta in ya ka dhaco halka shirka maamul u sameynta Gobolada KG soomaaliya ee Baydhabo Janaay.